यी अंगहरूलाई बारम्बार छुँदा हुन्छ स्वास्थ्यलाई हानि ! – Jagaran Nepal
यी अंगहरूलाई बारम्बार छुँदा हुन्छ स्वास्थ्यलाई हानि !
हामीहरू स्वस्थ रहनका लागि हरसम्भव कोशिश गरिरहेका हुन्छौं । तैपनि नजानिकनै हामीहरू गल्ती गरिरहेका हुन्छौं जसले पछि गम्भीर परिणाम निकाल्छन् ।केही मानिसलाई शरीरका अंग बारम्बार छुने फोहोरी बानी लागेको हुन्छ । यो बानीले स्वास्थ्यलाई हानि गर्छ । तपाईंमा पनि यस्तो बानी छ भने सुधार्नुस् ।
औंलामा ब्याक्टेरिया:केही मानिस बारम्बार हातले आँखा मिचिरहेका हुन्छन् । यसो गर्दा आँखाभित्र ब्याक्टेरिया छिर्छन् । यी ब्याक्टेरियाका कारण आँखा चिलाउने, पोल्ने र पानी निस्कने समस्या आउँछ ।
डण्डीफोर चलाउने:अनुहारमा डण्डीफोर आउनु सामान्य कुरा हो । तर केही मानिस डण्डीफोरमा बारम्बार हात पु–याइरहेका हुन्छन् । डण्डीफोर छुँदा ब्याक्टेरिया अनुहारको अन्य भागमा पुग्छन् । अनि ती भागमा फोकाफोकी आउँछन् । फोकाफोकी छोइरहँदा डण्डीफोर चर्किरहन्छ ।
मुख:खाना खाँदा कहिलेकाहीँ केही कुरा अड्किएमा केही मानिस मुखभित्र औंला घुसाएर निकालिरहेका भेटिन्छन् । यो बानीका कारण हातका ब्याक्टेरियाहरू मुखभित्र पुग्छन् अनि मुखका चाहिँ हातमा आइपुग्छन् । यसरी ब्याक्टेरिया साटिँदा मुखका लागि खतरनाक हुन्छ । यसो गर्दा मुख गनाउने, दाँतमा पीडा हुने र सड्न थाल्ने समस्या आउँछ ।
नाक:नाकमा औंला घुसाउँदा ब्याक्टेरिया हातमा टाँसिन्छ । अनि हातको ब्याक्टेरिया नाकमा पस्छन् । नाकमा कीटाणु पस्दा सास फेर्न समस्या र फोक्सोको रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ । फोहोरी हात साबुनपानीले धुने गर्नुस् ।
नङ:केही मानिस नङ चपाएर बस्छन् । यसो गर्दा फोहोरी ब्याक्टेरिया पेटमा पुग्छ । कीटाणु पेटमा पुग्दा पाचनसम्बन्धी समस्या आइलाग्छ । हप्तामा एकचोटि अवश्य नङ काट्ने गर्नुस् ।